भोकै मर्नुभन्दा मागी खानु निको | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला.. लकडाउन कथा
भोकै मर्नुभन्दा मागी खानु निको
२९ बैशाख २०७७, सोमबार २०:३५
आज ४२ दिन भयो घरमा बसेको । म गाडीमा सहचालकको काम गर्छु । यो काम २०७० सालदेखि गर्दै आएको छु । महिनामा ७ देखि १० ट्रिपसम्म गर्थ्यो मेरो गाडीले । वीरगन्जदेखि पोखरासम्म र पोखरादेखि वीरगन्जसम्म आइपुग्दा कमाइ त्यस्तै ३००० देखि ३५०० रुपैयाँसम्म हुन्थ्यो । महिनाको तीसदेखि पैँतीस हजारसम्म मेरो कमाइ हुन्थ्यो । यही कमाइले घरमा मसहित चार जना पालिन्थ्यौँ ।
मेरो पाँच जनाको परिवार छ । म, मरी श्रीमती, दुईवटी छोरी र एउटा छोरा । एउटी छोरीको बिहे भइसकेको छ । पोहरसाल छोरीको बिहे गर्दा दुई लाख पचास हजार ऋण लिएको थिएँ । घर भाडामा दश हजार, छोराछोरीको पढाइमा सात हजार, घर खर्च दश हजार र ऋणको किस्ता तिर्न छ हजार लाग्छ । मेरो श्रीमती पनि निजी स्कूलमा सहयोगी छिन् । उनले काम गर्न थालेको पनि दश वर्ष भइसक्यो ।
म लकडाउन सुरु भएको अघिल्लो दिनदेखि नै घरमा छु । एक-दुई दिन त घरमा बस्दा सजिलै भो तर म डुलिरहने मान्छेलाई घरमा बस्दा-बस्दा अल्छी लागिसक्यो ।
पैसा आउने ठाउँ पनि कतै छैन, खर्च मात्रै छ तर घरमा बस्नेबाहेक अरू केही गर्ने उपाय पनि त छैन । किनभने लकडाउन हाम्रै लागि हो । तर अझ केही दिन लकडाउन चलिरहने हो भने म र म जस्ता काम गरेर परिवार पाल्ने र पालिनेहरू कोरोनाले भन्दा भोकमरीले मर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्नँ । लकडाउनले म जस्ता धेरैको गरिखाने बाटो बन्द गरिदिएको छ, लकडाउनसँगै आर्थिक अवस्था पनि डाउन भएको छ अहिले ।
आजसम्म त पहिलाकै कमाइबाट खान पुगेको छ तर कामै नगरी बसीबसी कहिलेसम्म खान पाइन्छ र ? अहिले खानेकुरा पाउन पनि गाह्रो छ र पाइए पनि भाउ बढेको छ । आम्दानीको स्रोत सुकेको छ खर्च बढेको छ । नुनदेखि सबै किनेर खानुपर्ने । त्यसमाथि भाडाको घर । अझै कति समय लम्बिन्छ होला है यो लकडाउन ?
अब छिट्टै नै लकडाउन खोल्छ रे भन्ने पनि हल्ला सुनिन्छ । तर खुल्ने दिन आएपछि जहिले थप्यो मात्र भन्छ । अझै केही महिना यस्तै हुने हो भने छाक टार्न गाह्रो पर्छ । मेरा विचारमा कि लकडाउन खोल्नुपर्छ कि त सरकारले सबैलाई राहत बाँड्नुपर्छ । गाडीमा तेल हाल्न भनेर साहूसँग लिएको तेह्र हजार पनि खर्च भयो । अब त्यो पैसा पनि कहाँबाट तिर्नु भनेर डर लागेको छ । चैत र वैशाखको तलब साहूले दिन्छन् कि दिँदैनन् कुन्नि ! गाडी चलेकै छैन, तलब माग्नु पनि कसरी ?
समाचार सुन्दा झन् डर लाग्छ आजकल । म जुन बसपार्कमा चिया खान्थेँ त्यही बसपार्कमा चिया पसल गर्ने एक महिलामा कोरोना सङ्क्रमण भएको समाचारमा आयो । कोरोना हाम्रोमा भन्दा भारतमा धेरै फैलिएको समाचारले भनिरहन्छ । म पोखरा जाँदा प्रायःजसो मेरो गाडीमा भारतकै यात्री हुन्थे । त्यसैले मनमा डर लागिरहेको छ ।
थाहै नपाई लकडाउन भएकाले गाडीमा काम गर्ने मेरा धेरै साथीहरू बसपार्कमै अलपत्र परेका छन् । म त वीरगन्जकै भएकाले धन्न घर आउन पाएँ । उनीहरूसँग फोनमा कुरा गर्दा मलाई सारै नाराम्रो लाग्छ । नजिकैको भएर पनि सबै साथीलाई घरमा ल्याएर राख्न सक्दिनँ ।
मेरो गाडीका साहू पोखराका हुन् । बेलाबेलामा फोन गरेर खबर सोधिरहन्छन् । साहूसँग अचल सम्पत्ति भए पनि हातमा नगद छैन । एक हिसाबले सबै मारमा छौं । म जस्ता गाडीको लाइनमा काम गर्ने धेरै साथीहरूको अवस्था दयनीय छ । आम्दानी छैन । किनेर खाने पैसा छैन । साहूसँग पैसा लिने अवस्था पनि छैन ।
अरू बेला एक जनालाई केही समस्या पर्दा अर्कोसँग सापटी गरिन्थ्यो तर अहिले त सबैको एउटै अवस्था छ । गाडी बन्द छ । आम्दानीको अरू कुनै बाटो छैन । मेरै गुरुजी जीतपुरमा बसिरहनु भएको छ, पैसा सकियो भन्नुहुन्थ्यो फोनमा । बारीमा जे छ त्यसैबाट काम चलाइरहनु भएको छ रे ।
मलाई दुई-चार जना साथीले राहतका लागि प्रयास गरौँ भनेर फोन गरेका थिए । भोकै मर्नुभन्दा त मागेर भए पनि खानुपर्छ । अहिलेसम्म त्यसो गरेका छैनौं । लकडाउन थपियो भनेचैं राहत नखोजेर उपाय छैन । अहलेसम्म त यसरी मागेर खानुपरेको थिएन अब नमागी नहोला जस्तो छैन । हामी ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको यही त हो पीर । पैसा बचत हुँदैन, एक महिनाको तलबले एक महिना घर धान्नुपर्छ । अब त दुई महिना भइसक्यो तलब नआएको । काम भए पो तलब आउनु । धन्न बच्चाहरूको फि तिर्नुपरेको छैन तर किस्ता त मेरो काम भएन भनेर रोकिदैन । यो दुई महिनाको तलब पाइएन भने कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ?
मलाई घरी आफ्नो समस्या ठूलो लाग्छ, घरी साथीहरूको । म त जे भए पनि यस्तो गाह्रो बेलामा आफ्नै घरमा र घरपरिवारसँग त छु । उनीहरू त घरभन्दा टाढा छन् । यतिका दिनसम्म खान, सुत्न कसरी गर्दै होलान् ? एक दिन होइन, दुई दिन होइन । उनीहरूलाई धेरै कठिन छ । घर जान नपाएकाहरूलाई त जान दिए हुने जस्तो पनि लाग्छ । आफ्नै घरमा, आफ्नै परिवारसँग भइयो भने दुःखका दिन जसोतसो कट्थे होला । तर अब जे भए पनि हामीले सरकारको निर्णय मान्नै परिहाल्यो क्यारे !
यो कथा खेम बहादुरसंग गरीएको कुराकानीमा रहेर शिवनाथ यादबले लेख्नु भएको हो ।
६ असार २०७७, शनिबार १६:००
दिलीप प्रताप खाँड